Kuzivisa Nyevero ne Dzivirira yako Yakareba Stickers muAŞTİ | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraKuzivisa Nyevero ne Dzivirira yako Yakareba Stickers muAŞTİ
25 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, PHOTOS, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, TURKEY
Kuzivisa nyevero neasthma
Ankara Metropolitan Municipality inoenderera mberi nekuyambira vagari nekutora matanho matsva ekudzivirira kubuda kweiyo coronavirus. Nechishandiso chitsva chakatangwa muBaşkent, 'chengetedza nzvimbo dzako' zvimiti zvakaiswa muzvivakwa zveMetropolitan Municipality, kunyanya AŞTİ. Vachitaura kuti vatanga kuendesa "zvimiti" kumisika, Metropolitan Municipality Police department Mutungamiriri weFasafa Koç vakati vanovavarira kupa ruzivo muvagari vehutano hwavo uye hwehutano hwevamwe.
Ankara Metropolitan Municipality iri kuenderera mberi nekurwisa kwayo kubuda kwegoronavirus nekutora matanho matsva.
Ikuenderera mberi yambiro yayo kuma social media account, zvigadzirwa zvemadhorobha nemaposta paine kudanwa kwe "HomeKal", Metropolitan Municipality akagadzirira "chengetedza kure" kwako kunamatira ziviso.
Kutanga KUSVIRA MUAŞTİ
Kuisa izvi "zvitupa" muAŞTİ, umo mune vafambi vane ruzivo, Metropolitan Municipality inoona kuti vagari vakamirira mutsara wetaiti pamberi pemahofisi emakambani emabhazi vanoteerera yambiro iyi.
Vachitaura kuti basa rekuuraya hutachiona rinopfuurira muAŞTİ yehutano hweveruzhinji, Mutungamiriri weMapurisa weMetropolitan Police Head Mustafa Koç akataura kuti ivo vanoda kusimudzira ziviso pakati pevagari nevemakanamato akaiswa pasi, ndokuti:
"Isu tine hanya nezvekuuraya hutachiona muchiratidziro cheMetropolitan Municipality kurwisa kupararira kwegoronavirus." Kunze kweizvozvo, isu tiri kutora kurwira uku nhanho mberi uye kushanda kuti tigadzire vanhu vedu nezve kuchengetedzwa kwenharaunda kure. Kune kuderera kukuru kwehuwandu hwevatasvi, asi muAŞTİ, takaita "zvimiti" pane nzvimbo dzekumirira pamberi pemapuratifomu, uye takazvinamatira kune vakakwira. Denderedzwa reGurukota reMukati meMukati me Ministry of Internal Affairs rakaitwa kuitira kuti vagare munhu mumwe muzvigaro zvakapetana mumabhazi, uye kuti vagare vachiyambuka kumashure kumashure nezvigaro zvepamberi. Takazivisa izvi kumakambani ebhazi. Isu tinotevera kuitiswa kwayo kuburikidza nemapurisa nevanochengetedza. Mafemu ane kurasikirwa kwakakosha kwemari. Nekuraira kweMutungamiri wedu Mr. Mansur Yavaş uye nesarudzo yeBUGSAŞ Board of Directors, takadzikisa mari yakatambirwa kubva kumabhazi nehafu mukubuda kubva kuAŞTİ. Isu tinoona kunzwisiswa mukati mevagari vedu. "Ndinoshevedzera kuvagari vese veA Ankara, ndapota garai pamusha, chengetedza hukama kana wabuda, dzivirira hutachiona."
Mehmet Bingöl, anoshanda kuhofisi yekutengesa matikiti, akataura kuti chishandiso chitsva ichi chakabatsira ndokuti, "Nzvimbo dzekubatira munzvimbo dzinobatsira. Isu tinovakumbira kuti vataure nesu nekumira pamapepa kuitira kuti vagone kusimudza ruzivo pakati pevanopfuura. Iyo Metropolitan Municipality inoenderera mberi nemabasa ayo kurwisa hutachiona muAŞTİ. Ndinoda kuunza kugutsikana kwangu kuna Mansur Yavaş abva pano. ”Faruk Çayan, uyo akaenda kuDenizli, akasimbisa kukosha kwekunyevera uye nekuchenjerera," Vakaisa kamera inopisa mugedhi rehubhu, ichi chikumbiro chakakwezva ini. Kuti ndidzivirire chinhambwe chemagariro, ndakawana chishandiso ichi chakabudirira kwazvo, paine zviwitsi zvakasungirirwa pasi uye pakakwirira. Achisvika mubhazi, muridzi wekambani akagovera mask, Metropolitan Municipality akagadzira kuzivikanwa pamunhu wese. Chigaro chimwe chinosiyiwa mumabhazi ekufamba munharaunda. Ini ndinotenda kuti kana munhu wese akatora nzira dzekudzivirira dzakakodzera, tichakunda mazuva ano nekukurumidza sezvinobvira ”.
RAKANYANYA KUTI MAKATA
Vachitaura kuti vanopa zvimiti zvekunyevera kumisika zvinoshandiswa zvakanyanya nevagari, mukuru weDhipatimendi reMapurisa, Mustafa Koç, akataura kuti vakasheedzera kumba nemaposta avakagadzirira.
Koç, uyo akaongorora nemapoka emapurisa mumisika makaitwa chikumbiro, akapa ruzivo runotevera:
"Pamusuwo wemisika, tinosungira 'kumba kumba kana wapedza kutenga' mapepa ekuzivisa. Imwe denderedzwa yeUshumiri hweMukati medu yakaendeswa kugurukota redu. Kuti titevedzere nechitenderedzo chinotarisa huwandu hwevatengi vanogona kuwanikwa zvichienderana nemamita mativi emisika, isu takatumira yambiro dzinoratidza kuti vangani vatengi vanogona kupinda nekupinda kwemisika. Isu tinonamatira zvakare 'chengetedza chinhambwe chako' zvitonamira pasi kuti udzivise kuunganidzwa pamberi pemhosva. Tinoda kuwedzera zvidzidzo izvi muYakara yose. ”
Achiratidzira kuti akaona zvitanda izvi achitenga, Tuncer Ömür akati, "Panofanira kuva nenhambwe kune hutano." A zvine musoro kushandisa. Ini ndinofarira zvikuru tsika yekuchengetedza nzvimbo yekupatsanuka pakati pevatengi pavanenge vachitengesa kumacashier. "Ndinoda kutenda mutungamiri wedu nevanhu vese vakapa rubatsiro."
Zvimiti, zvakatanga kuiswa muzvivakwa zveMetropolitan Municipality, zvinoshandiswawo mukati mekukwirisa.
Vachitungamira hutano hwevashandi nezvinamati neyambiro yekudzivirira nzanga, Metropolitan Municipality inoyambira vanhu vana kuti vatore ma lifti kubva padambudziko rehosha. Başak Yılmaz anobva kuMetropolitan vashandi akati, "Ndiri kugutsikana nematanho anotorwa kuchengetedza hutano hwevashandi." Ndinoda kutenda munhu wese akapa, kunyanya Meya weDunhu reMetropolitan Mansur Yavaş. "Esra Okkalı akati," Ndiri kufadzwa kwazvo nemagariro ekutanga akaitwa kuMunharaunda ". Osman Özcan akataura kuti anofunga kuti zvimiti zvine zverunyararo rweyambiro yehutano zvinobudirira, ndokuti, "Ini ndinowana zviitwa ngatidzivirirei hukama hwakatangwa nekanzuru yedu nekuda kwechirwere chechirwere".
Nzvimbo dzanamira dzinoiswa kuMetro ne ANKARAY Zviteshi, panogarwa vagari zuva nezuva, munguva pfupi.
Kukurudzira Kukumikidza Seminari Yezvitima Zvevashandi
Kudzidza Kuziva Kwemazinga Ekuputika muTCDD 1.
Kuziva Kuitika paNhanho Kupfuura muAdana
Kuziva mabhasikoro kuchasimbiswa muGaziantep
Beykoz University uye TCDD Inobata Chiitiko Chekuona Njodzi / Chiitiko pa Rail Rail Systems
Autism Awareness Inoshanda muAdana Subway
Kudzidziswa Kukudzidzira Vatyairi Bhasi kuEkikiehir
Kujekesa Basa kubva kuYunivhesiti Vadzidzi
Migwagwa yakakosha yevatambi yakagadzirirwa kukurudzira
Nzira dzekudzidziswa kwekufamba kwepamigwagwa yeAlanya Municipal Staff
Chirongwa Chekuziva Zvokufamba Kwemigwagwa kubva kuSakarya Metropolitan
Mahir Eller Project Inomutsa Kuzivisa
Kugogodza paTram Kuzivisa
Garai Kumba Kwakanyorwa neRed Mwenje muBozüyük
Inokosha kune iyo Coronavirus: Solidarity uye Packaging